Waa maxay sababta ay u doorteen shir-weyne - Ikhtiyaarada Dugsiga Hoose - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Maxaa loo Doortaa Shir-madaxeedka?
Daryeel iyo Feejignaan.
(Caqabado) - Waxaan leenahay macallimiin jawaab iyo aqoonba leh oo ku faraxsan shaqada xirfadeed ee waxbaridda iyo raacitaanka waxbarashada.
(Awood-siin) - Ardayda ku halganka deegaannada dugsi-dhaqameedka caadiga ah waxay runtii ku fiicnaan karaan jawiga fasalka ee onlaynka ah. Qeexida jadwalka gambaleelka si fudud ayey u baaba'aan ardayduna way ku sii adkaan karaan iyada oo aan wax carqaladeyn ah lagu samayn fasalka caadiga ah.
Fursadda inaad naftaada noqotid!
(Awood siinta / loo wada siman yahay) - Mar dambe kuma qasbanaan doontid inaad ku tartamtid si aad fikradahaaga ula wadaagtid ama naftaada u sheegtid. Iskuulkayaga, codkaaga waa mid hal-hal ah oo lala yeelanayo macallinka oo garoonka ayaa la soo dhejiyay.
Jawi waxbarasho casri ah.
(Jawaab Horumarineed) - Qalabka internetka iyo kumbuyuutarka ee aan u isticmaalno barnaamijkeenna waa qeyb ka mid ah isbeddelada soo kordha ee xirfadaha aad u isticmaasho adduunka xirfad-yaqaannada.
Shaqsi Ahaanshaha iyo dabacsanaanta.
(Jawaab ahaan Horumar ah) - Ka dhig iskuulka mid ka shaqeeya shuruudaha ku habboon qaabkaaga waxbarasho, danahaaga, xawaaraha aad ugu baahan tahay inaad ku guuleysato, iyo fursadda aad si dhab ah u dhex gasho danahaaga.